ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: လွင်မင်းဗိုလ်
ဒီကောင်လေးကို ကျနော့်သူငယ်ချင်း အားလုံးက ကြိုက်ကြပါတယ်.. ကွန်ပျူတာကနေ Wifi ပြန်ထုတ်သုံးလို့ ရတဲ့အတွက်.. ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကနေ တခြားဖုန်းတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေပါ အင်တာနက် အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေး တခုပါ.. အရင်တုန်းကလည်း Version အဟောင်းတခု တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်.. အဲ့ဒီဗါးရှင်းအဟောင်းမှာတုန်းက Patch နဲ့ဖူးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး သုံးကြတာပါ.. အရင်တုန်းက ဗါးရှင်းအဟောင်းပိုစ့်ကို ဒီနေရာကနေ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. အခု Latest Version မှာတော့ Patch / Keygen / Serial Keys သုံးမျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်.. မိမိတို့နဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် တခုခုနဲ့ ဖူးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. ကျနော်ကတော့ ဒီပိုစ့်မှာ Keys တွေနဲ့ ဖူးဖြစ်အောင်လုပ်ပြ ပေးထားပါတယ်.. အသုံးပြုပုံကတော့ အရင်တုန်းက Version အဟောင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ.. ဒီပိုစ့်မှာလည်း ပြန်လည် လုပ်ပြထားပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများကလည်း အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.6 MB ရှိပါတယ်..
Posted by lwinminbo at 20:360comments
Labels: အထွေထွေသုံး Software များ
The Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool helps to remove malicious software from your computers that are running Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, or Windows XP.
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ဘာအတွက် အသုံးဝင်လည်းဆိုတော့ အပေါ်မှာ Microsoft ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ ရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ..။ ကျနော်တို့ရဲ့ စက်ထဲကို ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ အတူပါလာတတ်တဲ့ ဟတ်ကာတွေရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို Microsoft ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဒီ Tool လေးနဲ့ရှင်းထုတ်ပစ်လို့ ရပါတယ်.. ဒီကောင်လေးက Install ဆွဲထည့်ဖို့ မလိုတဲ့ ၂ချက်တောက်ပြီး တန်းသုံးလို့ ရတဲ့ ကောင်လေးပါ.. ထွေထွေထူးထူး လုပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူး.. အောက်မှာလည်း ကျနော်သုံးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြပေးထားပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ မိမိတို့ ဝင်ဒိုးနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် 32-bit (or) 64-bit Version ကို ရွေးပြီး အသုံကြပါ..။ အောက်ကလင့်တွေကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ..
Posted by lwinminbo at 16:100comments
Windows Movie Maker 2012 and Windows Movie Maker 2.6 (Old Version)
18 Nov 12, 01:28 PM
ဇော်ဇော်: window movie maker လေးလိုချင်လို့ပါ
ဒီကောင်လေးကို Microsoft ကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးထားတဲ့ ဖရီးသုံးလို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေး တခုပါ.. Video တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို Effect တွေနဲ့ Slide Show တွေ ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာ ဒီကောင်လေးနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်..။ ဒီလို Effect တွေနဲ့ အသုံးပြုရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို Video ဖိုင်လေးတွေနဲ့ တွဲပြပေးမှာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.. ပုံတွေနဲ့ လုပ်ပြဖို့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး.. ဒါကြောင့် အောက်မှာ Video ဖိုင်လေးတွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်.. Video ဖိုင်လေးတွေ ကြည့်ရင်း ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုတတ်သွားပါလိမ့်မယ်..။ Windows Movie Maker 2012 အတွက် Downloader ၂ခုကို ပူတွဲထည့်ပေးထားပါတယ်.. တခုက Microsoft Windows Essentials 2012 Downloader ဖြစ်ပြီး နောက်တခုကတော့ Softonic Downloader ဖြစ်ပါတယ်..။ မိမိတို့အတွက် အဆင်ပြေမယ့် ဒေါင်းလော့ဒါနဲ့ ဒီဆော့ဝဲလ်ကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. Downloader ကိုမိမိတို့စက်ထဲ Install ထည့်ပေးပြီး Download စာသားကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် ဒီဆော့ဝဲလ်ကို ဒေါင်းယူပေးပါလိမ့်မယ်..။ 2012 အတွက် ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 133 MB ကျော်လောက်ရှိပါတယ်..။ နောက်တခုက Windows Movie Maker 2.6 ကတော့ Windows Vista အတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ ကောင်လေးပါ.. Windows7 နဲ့ Windows 8 တွေမှာလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်..။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4.9 MB ရှိပါတယ်.. ဆော့ဝဲလ်ကသေးတော့ Effect တွေတော့ သိပ်မများပါဘူး.. သုံးလို့တော့ အဆင်ပြေပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်တွေကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..
Posted by lwinminbo at 15:260comments
Labels: Video Editing Programs
15 Nov 12, 10:47 PM
ရဲထွန်း: Active@ File Recovery9အကိုရေ ဒီဆော့ဝဲအသုံးပြုပုံလေး ရှင်းပြပေးပါဗျာ
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ ဖျက်လိုက်ပြီးသား ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. သူ့အတွက် crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်.. crack ဖိုင်ထည့်နည်းကို အရင်တုန်းက ပိုစ့်တွေမှာလည်း ရှင်းပြပေးခဲ့ပြီးသားပါ.. နောက်ထပ် မသိသေးတဲ့သူများ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ဒီပိုစ့်မှာ ပြန်လည် လုပ်ပြပေးထားပါတယ်.. အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုပုံကို မူရင်းဆိုဒ်က Video ဖိုင်လေးနဲ့ ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်.. Video ဖိုင်လေး ကြည့်ပြီး လုပ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်..။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 14.1 MB ရှိပါတယ်..
Posted by lwinminbo at 00:20 1 comments
Labels: Data Recovery Tools
NOKIA ဖုန်းများအတွက် Computer နှင့်တွဲသုံးလို့ရမယ့် Nokia Suite နှင့် Zune Software
11 Nov 12, 08:33 PM
konyizaw: အကိုလေးရေ့ windows phone nokia610 ကို pc မှာကြည့်လို့ရအောင် pc suite software လေးကိုတင်ပေးပါလား
NOKIA Windows ဖုန်းတွေနဲ့ တခြား NOKIA ဖုန်းတွေအတွက် Computer နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရမယ့် ဆော့ဝဲလ် ၂ခုကို မူရင်းလင့်တွေကနေ ဒေါင်းယူလို့ ရအောင် လင့်ချိတ်ပေးထားပါတယ်.. ဒီလို Computer နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရမယ့် ဆော့ဝဲလ်တွေကိုလည်း တခြားဖုန်းသုံးတဲ့သူများ လိုအပ်ရင်တောင်းနိုင်ပါတယ်..။ လိုအပ်လို့ တောင်းတဲ့အခါမှာ မိမိတို့ဖုန်းရဲ့ အမျိုးအစား၊ Model ကိုထည့်ရေးပေးမှ Computer နဲ့ တွဲသုံးလို့ ရမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကို ရှာရလွယ်မှာပါ..။ ဒီဆော့ဝဲလ်တွေက Free ပေးသုံးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေပါ.. အခုဒီဆော့ဝဲလ် ၂ခုထဲက မိမိတို့ ဖုန်းနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် ကောင်လေးကို အောက်ကလင့် ၂ခုကနေ လိုအပ်တဲ့သူများ ရွေးယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်တော့နည်းနည်းများပါတယ်.. Nokia Suite က 89.5 MB ရှိပြီး Zune Software က 100.7 MB ရှိပါတယ်.. အသုံးပြုနည်း အနည်းငယ်ကို Video ဖိုင်လေးတွေ ရှာပြီး ချိတ်ပေးထားပါတယ်..
Posted by lwinminbo at 19:000comments
Cyber Cafe Pro 5.250 and Cyber Cafe Pro 6
9 Nov 12, 09:36 AM
nyilay: အကိုလွင်မင်း.. ခင်ဗျား. ညီလေးကို CYBERCAFEPRO verson5 လေးလို့ချင်လို့ပါ ကူရှာပေးပါလား...ခင်ဗျား ညီမှာ verson6တော့ရှိတယ် မသုံးတက်လို့ပါ.. လေးစားလျက်ပါ...ကိုလွင်
PC တလုံးကနေ တခြား PC တွေကို ထိမ်းချုပ်ဖို့ ဒီကောင်လေးက အသုံးဝင်ပါတယ်.. အပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ..။ ဒီကောင်လေးကို မတင်ပေးခင် ကျနော်စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာ စက်အများကြီးမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ဖို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် Video ဖိုင်တွေရှာဖွေရင်း ဒီကောင်လေးကို တင်ပေးဖို့ နောက်ကျနေတာပါ.. version5ကိုရှာလို့ရပေမယ့် သူ့အတွက် Video ဖိုင်ကိုတော့ ရှာလို့ မရပါ..။ ဒါကြောင့် Version6အသုံးပြုပုံတွေကိုပဲ Video ဖိုင်တွေချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လိုအပ်တဲ့သူများ Video တွေကြည့်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါ..။ ဆေ့ာဝဲလ်ကိုတော့ Version6အတွက် သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုဒ်ကနေ ဒါရိုက်လင့်ကို ချိတ်ပေးထားပါတယ်..။ Version5ကိုကျတော့ ကျနော်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်.. အသုံးပြုပုံ PDF နှစ်ခုပါ ထည့်ပေးထားလို့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 22.1 MB ရှိပါတယ်.. Version5ကို ဖူးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ သူ့အတွက် crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်.. crack ဖိုင်ထည့်နည်းကတော့ မနေ့ကတင်ပေးထားတဲ့ AusLogics Boost Speed v5.3.0.5 ပိုစ့်မှာ လုပ်ပြထားတဲ့ နည်းနဲ့ အတူတူပါပဲ.. မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ Version5or6ကို အောက်ကလင့်တွေကနေ ရွေးယူနိုင်ပါတယ်.. နောက်တခုက ဒီဆော့ဝဲလ်ကို တကယ်မလိုအပ်တဲ့သူများက စမ်းပြီးစက်ထဲမထည့်ဖို့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်.. မိမိတို့စက်က Power မနိုင်တဲ့အခါမှာ Error ကြီးကြီးမားမား တက်နိုင်ပါတယ်.. တကယ်လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ မိမိတို့စက်ထဲ မထည့်ခင် မိမိတို့စက်က တကယ်ထိန်းနိုင် မထိန်းနိုင် သေချာလေ့လာပြီးမှ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်စက်မှာ တကယ်ပဲ error ပေါ်ခဲ့လို့ Windows တောင်မတက်နိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. တောင်းတဲ့လူရှိလို့ တင်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် တကယ်မလိုအပ်တဲ့သူများ ဒီဆော့ဝဲလ်ကို လုံးဝ မစမ်းသပ်ပါနဲ့.. တကယ်လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ အောက်ကလင့်တွေကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..
Posted by lwinminbo at 17:500comments
AusLogics Boost Speed v5.3.0.5
7 Nov 12, 04:48 AM
au gmyatzaw.91@gmail.com: အကိုရယ် ကျနော်ကို Auslogics.BoostSpeed ဆော့ဝဲလ်လေး တင်ပေးပါအုံးလားအကိုရယ် ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံလေးနဲ့၇ှင်ပြပေးပါနော် အကို့ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ အားလဲအားကျတယ် နောင်လဲဒီထက်မက နည်းပညာတွေမျှဝေနိုင်ပါစေဗျာ
ဒီကောင်လေးကို ရှာတွေ့ထားတာ ၃ရက်လောက်ရှိပါပြီ.. Full သုံးလို့ မရသေးလို့ မတင်ပေးသေးတာ.. ဒီနေ့တော့သူ့အတွက် ဖူးသုံးလို့ရမယ့် crack ဖိုင်လေး ရလာလို့.. အဆင်ပြေသွားပါတယ်.. crack ဖိုင်ထည့်နည်းကတော့ အရင်တုန်းက တင်ပေးထားတဲ့ Adobe CS6 အားလုံးကို Activator တခုတည်းနဲ့ ဖူးဖြစ်အောင် လုပ်နည်း ပိုစ့်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုပ်ပြထားပါတယ်.. မသိသေးတဲ့သူများ အတွက်လည်း ဒီပိုစ့်မှာ အဲ့ဒီနည်းအတိုင်း ထပ်လုပ်ပြထားပါတယ်.. သူ့အတွက် crack ဖိုင်လေး ထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပါပြီ.. အသုံးပြုနည်းကိုလည်း အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ.. ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ရဲ့စက်ကို သွက်လက်မြန်ဆန်စေမယ့် ပရိုဂရမ်လေး တခုပါ.. Junk ဖိုင်လို့ခေါ်တဲ့ အမှိုက်တွေရှင်းပေးမယ်.. Registry Error တွေကို ပြန်ကောင်းစေမယ်.. ဖိုင်စီပေးမယ်.. Browser ရဲ့ History တွေကိုလည်း ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်.. မိမိတို့စက်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေး တခုပါပဲ.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10.1 MB ရှိပါတယ်..
Posted by lwinminbo at 17:19 1 comments
Labels: Computer နှင့် Browser ကိုမြန်စေမယ့် Tools များ
Live Pebble Screen Saver
ဒီကောင်လေးက Screen Saver နောက်တခုပါ.. အပေါ်ပုံအတိုင်း မိမိတို့စက်မှာ ပေါ်နေစေမယ့် မျက်လုံးအေးစေတဲ့ ကောင်လေးပါပဲ.. ရေစက်လေးတွေလည်း တစက်ပြီးတစက် ကျနေပါသေးတယ်.. အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ဒီကောင်လေးကို Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ပေါ်လာမယ့်ပုံလေးမှာ နည်းနည်းလေး ပြောင်းပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ.. လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 3.2 MB ရှိပါတယ်..
Posted by lwinminbo at 19:580comments
Labels: Animated Wallpaper and Screen Saver
ကွန်ပျူတာလေ့လာခါစ သူများဒီပို့စ်များကို အရင်ဖတ်ပါ။
Shut down, Restart, Sleep
Winrar ဖြင့် ဖိုင်ဖြည်နည်း၊ ဖိုင်ချုပ်နည်း
ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး Kaspersky Rescue Disk 10
ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးကတော့ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ..။ အရမ်းကောင်းပါတယ်..။ ခဏခဏလည်းလုပ်ပေးဖို့ မလိုပါဘူး..။ မိမိတ...
Photoshine Software ... ဓါတ်ပုံတွေကို ဘက်ဂရောင်း လှလှလေးတွေနဲ့ သုံးချင်သူများအတွက်
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ပုံတွေကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်းတီးပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဖရိန်လှလှလေးတွေလည်း တော်တော်များများပါပါတယ်..။ အောက်မှာတော...
မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့မှာ နာရီထည့်နည်းလေးကို သိချင်တဲ့လူရှိလို့ ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်..။ တကယ်တော့ လုပ်နည်းမသိသေးလို့ ခက်နေတာပါ..။ သိသွားရင်ဘာမှ မခ...
သူငယ်ချင်းများရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ Mozilla Firefox ကို မြန်စေမယ့် နည်းလမ်းများကို လိုက်ရှာပါတယ်..။ အရင်တုန်းကတော့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးပါ...
ဒီတခါတော့ ဝင်းဒိုးမှာ Format ချနည်းလေးကို ရေးပေးဖို့ တောင်းထားတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတာနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ..။ တကယ်တော့ ဝင်းဒို...
Photoshop ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများ ဖြတ်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်း
Photoshop နဲ့ စာရွက်စာတန်းတွေ ဖြတ်ကပ်လုပ်တာလေး ပြောပြချင်လို့ပါ..။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ လူတွေအတွက် ဒီလိုနည်းလေးတွေလည်း တတ်ထားသင့်ပါတယ်..။...
ကျနော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Windows logs များကိုရှင်းပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်..။ Windows logs များလာရင် စက်ကိုလေးစေပါတယ်..။ ကွန်ပျူတာရဲ့ မောက...
Gtalk မှာ မြန်မာစာမပေါ်ခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း
ဒီနည်းလေးကတော့ ဆိုဒ်တော်တော်များမှာ တင်ထားပြီးသားပါ..။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်က ကောင်းတဲ့နည်းလေးတွေအပြင် နောက်ထပ်ကောင်းတာလေးတွေပါ ထပ်ဖြည့်ပြထား...
12 Sep 12, 08:03 PM ဝေယံလင်း: အကိုေ၇ ဘလော့ကတော့အသစ်ဆွဲလိုက်၇တယ် ဒီတခါတော့အဆင်ပြေပါတယ် အဟဲ အကိုတောင်းစ၇ာလေးရှိလိုပါ မြန်မာ font အလှလေးတွေတင...
Google Chrome အသုံးပြုပုံ၊ အသုံးပြုနည်းကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တော်တော်များမှာ ရေးထားကြတာတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်..။ ကျနော်ကတော့ ပုံလေးတွေနဲ့ နားလည်လွယ်အော...
ကျနော်ရေးသောအခြေခံနည်းလမ်းများကို Windows7နှင့်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ၊မသုံးတတ်သေးသော သူငယ်ချင်း၊ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား ကျနော့်ဆိုဒ်လေးသို့လာရောက် လေ့လာနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြင့် အခြေခံနည်းပညာများပြန့်ပွါးရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်..။ လွင်မင်းဗိုလ် http://lwinminbo.blogspot.com/
ကျနော့်ဆိုဒ်လေးကိုညွှန်းချင်ရင်(နောက်ခံအနက်ရောင် Blog များအတွက်)
နောက်ခံအဖြူရောင် Blog များအတွက်
Connectify Hotspot PRO v3.7.1.25486 (Latest Versio...
Windows Movie Maker 2012 and Windows Movie Maker 2...
NOKIA ဖုန်းများအတွက် Computer နှင့်တွဲသုံးလို့ရမယ်...
3D Numeric Clock Screen Saver
Internet Download Manager 6.12 Final Build 25
KASPERSKY 2013 OFFLINE UPDATE DATABASE - KIS/KAV/P...
Video Game Desktop Wallpapers - Full HD
IObit StartMenu8 1.0 Beta 2.0 (1105) For Windows 8...
Kaspersky Rescue Disk 10 Latest Version
Avira AntiVir Rescue System ISO (.exe) Latest Vers...
Windows 8 Screen မှာ Computer Icon ဖေါ်တတ်အောင်နှင့...
Windows 8 Gadget Pack v3.0
Windows 8 Enterprise Evaulation Version Direct Dow...
Windows7ISO 32-bit and 64-bit All Version (Offic...
Angry Birds Bad Piggies Final 1.0.0
Angry Birds Seasons 2.5.0 - Back to School
ကျနော့် Blog ကို ဒီဇိုင်း တစ်မျိုး ပြောင်းကြည့်ရအေ...
အထွေထွေသုံး Software များ (72) Windows7 အသုံးပြုနည်းများ (28) IDM Latest ဗါးရှင်းများ (20) Antivirus Programs (16) အထွေထွေနည်းလမ်းများ (15) Adobe Products (14) E-book (မြန်မာလို) (14) Games (13) Portable များ (13) Animated Wallpaper and Screen Saver (12) Burning Tools (12) Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းများ (7) Blogger And HTML (6) Data Recovery Tools (6) Gmail အသုံးပြုနည်းများ (6) Mozilla Firefox နှင့် ပြင်ဆင်ပေးရမည့်အချက်များ (6) Google Chrome နှင့် မြန်မာစာပေါ်အောင်လုပ်နည်း (5) MP3/VCD/DVD ဖြတ်၊ဆက် Tool များ (5) Windows7 and Windows XP ISO (5) Windows7 အသုံးပြုနည်းအခြေခံ (5) Computer နှင့် Browser ကိုမြန်စေမယ့် Tools များ (4) Drivers (4) Microsoft Office 2010 (4) Windows 8 (4) Error ဖြေရှင်းနည်းများ (3) Gtalk အသုံးပြုနည်းများ (3) Photo Slide Show Tools (3) Video Editing Programs (3) Windows7 Loader (3) Hard Disk ကို Partition ခွဲ၊ Format ချနည်း (2) Windows8 Themes (2) ဖိတ်စာကတ်၊ လိပ်စာကတ် ဖန်တီးခြင်း (2) 3D Animation Maker (1) English ရုပ်ရှင်များကြည့်ရန် (1) Hand Phone ထဲသို့ သီချင်းများသွင်းနည်း (1) Samsung ဖုန်းများမြန်မာဖေါင့်သွင်းနည်း (1) ဂီတသံစဉ်များဖန်တီးရန် (1) အတိုအထွာဗဟုသုတ (1)
Posted by naihan at 07:32